ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: June 2010
ဆွဲလက်စ စုတ်ချက်တွေ မပီပြင်သေးခင်
ဖမ်းဆုပ်လိုက် အားငယ်နေတာတွေ ပျောက်ရှသွားအောင်
ငါက ၂၄ နာရီပတ်လုံး
အရမ်းခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရေးပေးတဲ့ ကဗျာလေးပါ သူငယ်ချင်းဆို တာ အရင်းကနေ အဖျားထိချိုတဲ့ ကြံနဲ့တူပါတယ် ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန် ကျနော့်အတွက် ဟာသဇတ်ကားတစ်ကားမလိုပါဘူး ။ စိတ်ပျက်အားငယ်နေတဲ့ အချိန် သူငယ်ချင်းရဲ့ အပြုံးတစ်ချက် ကျနော့်ပခုံးပေါ်တင်လိုက်တဲ့ သူရဲ့လက်တွေကြားမှာ ကျနော် အားတက်ခဲ့ဖူးတယ် ။ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ စိုးရိမ်တကြီးမေးတတ်တဲ့ အားပေးစကားတွေကြားမှာ ယိုင်နဲ့သွားတဲ့ ခြေထောက်တွေ ပြန်ပြီးတည့်မတ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ ဘ၀တကွေ့မှာကျနော်တို့ဆုံခဲ့တယ် တနေ့နေ့တချိန်ချိန် တနေရာရာမှာ ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်မိပါတယ် ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်းရေ ။
အောက်တန်းစားက အောက်တန်းစား စိတ်ဓာတ်ကိုပိုင်ဆိုင်
မဖြူရတဲ့အထဲ မဲညစ်ညစ်အရည်တွေ သွန်းလောင်းပြီး
တစ်ကျော့ပြန် ကွင်းပြင်ထဲ ဆင်းခဲ့ပြန်ပြီး.
ငိုနေတဲ့ မျက်ဝန်းတွေကို မျက်မှန်မဲကြီးတပ်ပစ်လိုက်တယ်။
ဒီတပ်ထဲမှာ အားလုံးက (၃)ပွင့်ကြီးပဲ
ဖက်ထိပ်သွားလိုက်အုံး ပြန်လာရင် ပဲဟင်းနဲ့ ဘရိတ်ဒန့်ကပစ်လိုက်
ချွေးထွက်သွားရင် အားလုံး ကောင်းသွားလိုက်မယ်
အရင်တုန်းက ငယ်စိတ်လေးနဲ့ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာလေးပါ တခါခါ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရရင် ရခဲ့ဖူးတဲ့ ကော့မန့်လေးတွေကို ပြန်ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ မေ့သွားကြတဲ့ ခွဲခွာသွားကြတဲ့ သူတွေကိုအလွမ်းပြေပေါ့ ခင်မင်မှုတွေစစ်မှန်ရင် တစ်နေ့နေ့တော့ ပြန်ဆုံးအုံးမှာပါ ။ အမှတ်တရ ရခဲ့ဖူးတဲ့ ကော့မန့်လေးတွေပါတင်လိုက်ပါတယ် ။
Blogger မောင်ရှင်းသန့် said...
ကိုကြီးမျိုး ဖက်ထိပ် ပြန်ဆင်းပြီပေါ့ ဟဲဟဲ ........ ။ အားလုံး က သုံးပွင့်ချည်း ပဲဆိုပါလား ....... ။ ငါ့အကိုကြီးလည်း လိုချင်ရင်ပြောနော် ကျနော် စစ်ကိုင်းက အော်ဒါမှာ ပေးမယ်။ အပွင့် တင်မဟုတ်ဘူး အခက်တွေရော...... အခိုင်တွေရော ဟီဟိ ။
Blogger SoeMoe said...
Anonymous မမသီရိ said...
ငိုစရာ ရှိရင် ငိုလိုက် တော့ လဲ..
ပြီးသွား တာပါ ပဲ ကွာ..
မျက်မှန်မဲ ကြီး နဲ့တော့ လှမဲ့ ပုံ မမြင်...း(...
Blogger Welcome said...
အထက်နဲ့အောက် ဆိုတာ သဟဇာတ မဖြစ်တတ်ပါဘူး၊ အမြဲ ပဋိပက္ခပါပဲ
တစ်ခုခုစိတ်ဆိုးပြီး ပိတ်တာကိုများ ဘလော့ပျက်သွားတာတဲ့...ဟွန်း....နာမယ်...။
အောက်တန်းစားလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မရေးစမ်းပါနဲ့....
အဲဒီစကားလုံးက မောင်ရင့်လို သာမည်ညောင်ည
Blogger khinmyatnwe said...
Blogger sin dan lar said...
ဒီ နောက်ခံရောင်ကြီး.... လှဝူးးးး
Anonymous mtj said...
ဘလော့ဂ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပီပေါ့။ ကောင်းတယ် ညီလေး။
လောကမှာ ဘာကြီးဖြစ်ဖြစ် ချီးမွန်းခုနှစ်ရက် ကဲ့ရဲ့ခုနှစ်ရက် ပါပဲ။
စိတ်ထဲ ဒါဏ်ရာ တခုခု ဖြစ်သွားချိန်မှာ ခံစားရတာတော့ ဓမ္မတာပါပဲ။
ဘာမှ အားငယ်စရာမလိုဘူး ၀မ်းနည်းစရာ မလိုဘူး။
ညီကို အကို တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောချင်တာလေးတွေရှိတယ်။
ညီက ထိရှလွယ်တယ်။ ခံစားလွယ်တယ်။
ဒါပေမယ့် ညီ တကယ်တန်းမှာ အရာအားလုံးဟာ ထင်သလောက် မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်က ညီမှာ ၀မ်းသာစရာ ဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဆိုးစရာ ဖြစ်ဖြစ်
တခုခု ဖြစ်ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့ .... အခုချိန်မှာ အဲဒီ ကိစ္စကို ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် အဲဒီအချိန်ကလောက် မခံစားရတော့မှာ အသေအချာပဲ။
ဒါကြောင့်ညီရေ အသေးအမွှားကို အလေး မထား စမ်းပါနဲ့။
February 14, 2009 11:01 AM
Anonymous စိတ်စမ်းရေ said...
Blogger layma said...
မောင်မျိုးကို တစ်ခြမ်းနဲ့တစ်ပွင့်အဖြစ် ရာထိုးတိုးပေးလိုက်သည်..။ ပဲဟင်းနဲ့ဘရိတ်ဒန့် မကနဲ့ ..။ ဘာဂါစားပြီး နိုက်ကလပ်တက်ပစ်လိုက်...။
Blogger ဆောင်းယွန်းလ said...
ကိုယ့်ညီ တစ်စုံတစ်ရာကို ကြေကြေကွဲကွဲခံစားနေရပုံရတယ်
မြိုသိပ်မထားပဲ ခုလိုကဗျာလေးနဲ့ဖွင့်ချလိုက်တော့ ခံစားနေရတာတွေ ပေါ့မသွားဘူးလား....
Blogger Nyo Htet Nyo said...
ခေတ်ပြိုင်စကားလုံးလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ ညီ
Blogger Theint said...
ဒီဘလော့ခ်ကိုစဖတ်မိတဲ့နေ့ကစလို့ နေ့တိုင်းလိုလိုဖွင့်ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ကဗျာလေးတွေကိုလည်း တော်တော်သဘောကျတယ်။ အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဖွင့်မရတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ တစ်ခုခုကြောင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ သဘောပေါက်ပေမယ့် ပြန်မဖွင့်မှာကို စိုးပြီး စောင့်နေတာ အခုပြန်ဖွင့်ထားတာတွေ့တော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ ဆက်လက်အားပေးနေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ် သက်သက်တွေရှိနေတာမို့ အရှိန်မပျက် ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ပါစေ။ လောကဓံ ဆိုတာကတော့.........လောကဓံ ပေါ့လေ။
အနာဂတ်အကြောင်းရေးမယ့် စာတွေ တစ်သီကြီး
Blogger ဖိုးဂျယ် said...
blog မပိတ်ရဘူးလေ ညေင်မျိုးရ
ငါ့ကို ပြောပြီး ရက်တောင်ကူးရဲ့လားဟ
ဘာလဲ Blog ပိတ်တိုင်း ကစားနေတာ
၀င်ပါတာလား ဟ ဟ
Blogger Mhaw Sayar said...
အတက်အကျတွေ များနေပုံထောက်တော့ သရဲရထား စီးနေပုံရတယ်. ..
ပဲဟင်းတွေရော၊ ၃ ပွင့်တွေရော. ရှုပ်ရှက်ခတ်နေပါလား
အားလုံး ရှင်းသွားအောင် ကလပ် တစ်ရက်လောက် သွားတက်လိုက်. :P (မလေးမနဲ့ ဆို တိုက်တွန်းသူ ၂ ယောက် ရှိသွားပြီ)
Blogger ၀ှိုက်ဝှိုက် said...
Blogger ကိုတိုး said...
အားတော့ပေးနေတယ် နောက်ခံအရောင်ကြီးမလှဘူး။ ပြန်ပြောင်းပေးအုံး ငိုစရာရှိရင် ငိုချလိုက် ရင်ထဲမှာထားရင် မောပန်းတယ်နော်။
February 14, 2009 8:32 PM
Blogger တန်ခူး said...
မောင်မျိုးရေ… ဘလော့ပြန်ဖွင့်တာ တွေ့ ရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်…
ဒါကပဲ အရှူံးမပေးခြင်းတမျိုးမိုလား…
တန်ဖိုးဖြတ်မှုတွေက လူတဦးနဲ့ တဦး မတူကြပါဘူး… တချိန်ကျရင် မောင်မျိုးရဲ့ တန်ဖိုးတွေကို စစ်မှန်စွာ တန်ဖိုးထားနိုင်တဲ့သူနဲ့ တွေ့ လာမှာပါ… လူတိုင်းက အညွန့် တလူလူနဲ့ ပါ… ဆက်ကြိုးစားငါ့မောင်ရေ….
Blogger အိုင်လွယ်ပန် said...
Blogger BLACK DREAM said...
ဒါကြောင့်ပြောတာ...။ ကြောင်ကြာကြာရေမငုပ်ပါဘူးလို့ :P အခုတော့ပြန်ပေါ်လာပြီ :P
Blogger လွမ်းလုင် said...
ဘာကြီါ်တုန်းဟ... ဒါပေမယ့်... သုံးပွင့်ကြီးပဲ... အဟတ်ဟတ်
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလို ပါပဲ။
တကေါာ့ပြန်ကွင်းပြင်ထဲဆင်းခဲ့ပြီ ဒီကွင်းပြင်ထဲမှာ ဘာပွင့်တွေပဲဖစ်ြနေနေ သတ္တိရှိဖို့အလိုဆုံးပါ အားလုံးကောင်းသွားလိမ့်မယ် လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူး ပြင်ဦး
Blogger မိုးသောက် said...
ပိတ်လိုက်တာရော ဖွင့်လိုက်တာရော မသိလိုက်ဘူး
ပုံမှန်ပဲ နေပါ မောင်မျိုးရယ် ..
တစ်ဖက်ကို မှန်းကြည့်မနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်သာ ကြည့်
အခုလို ပြန်ရေးတာ သိရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်ဗျာ
Blogger Mhu Darye said...
ဘလော့ဂ်ဝင်မရလို့ ဘာဖြစ်လဲ မေးမလို့ဟာ.. သူက ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့သလို ဆိုတော့..။ အင်း ချွေးထွက်သွားရင် အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ။ အိုကေ?
သူ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး မဟုတ်ဘူး သူ့ ရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံး အလဲလဲအပြိုပြိုဖြစ်သွားရအောင်တိုက်စားသွားတဲ့ မီးပင်လယ် ၊တိုက်ခတ်သွားသော မီးမုန်တိုင်း သူအခုချိန်ထိ ညညအိပ်မက်ထဲမှာ မီးဆိုတဲ့ အရာကြီးက သူ့ ကိုခြောက်လှန့် နေတယ် ။မီး မီး အရမ်းကို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတယ် သူ( မီး ) က လူသားတွေ အတွက် အကျိုးပြုတာလား ၊ ရန်သူလား ၊မိတ်ဆွေလား သူဘာကိုမှမသိတော့ပါဘူး သူသိတာ မီးဆိုတဲ့ အသံ ၊ မီးဆိုတာကို တွေ့ ရရင် ခန္ဒာတစ်ခုလုံး တုန်ပြီး အသိအာရုံတွေ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ် ပြီးတော့ သူ့ ရဲ့ မေမေ ၊ သူချစ်တဲ့ မိသားစုတွေ ၊ အားလုံးအားလုံး သူ့ နားကပျောက်ကွယ်သွားကုန်ပြီး အခုသူ့ နားမှာ မျက်မမြင် ဖခင်ကြီး အမေ့ ကိုအရမ်းချစ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ အစ်ကိုကြီးက သာမန်လူတစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ အသိအာရုံတွေ မရှိတော့ဘူး ပတ်ဝန်ကျင်က ပြောကြတာ အစ်ကိုကြီးက ရူးနေပြီးတဲ့ ၊ ဘာမှနားမလည်သေးတဲ့ အမြဲတမ်း အားငယ်နေတတ်တဲ့ သူ့ ရဲ့ ညီမလေး သူဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ၊ ဘာဆက်လုပ်သင့်သလဲ ပြောကြပါအုံးဗျာ...................။
၀န်ထမ်း အလုပ်နဲ့ ရိုးသား ကြိုးစားတဲ့ အဖေ ၊ သားသမီးတွေ များပေမယ့် ဈေးရောင်းဈေဝယ် အလုပ်နဲ့အရမ်းကြိုးစား တတ်တဲ့ သူတို့ ဘ၀ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်အမေ့ ကြောင့် သူတို့ ဘ၀တွေ အေးချမ်းခဲ့တာပေါ့ ။သူတို့မိသားစုတွေ တစ်နေ့တော့ အမေ့ ရဲ့ မွေးရပ် နယ်မြို့ လေးတစ်မြို့ ကို ပြောင်းခဲ့ကြတယ် ။ အမေကတော့ သူ့ ရဲ့ ဆွေမျိုးတွေ နဲ့နီးနီးနားနား နေရတော့မှာမို့အရမ်းကိုပျော်နေတယ်လေ သူတို့ အရင်နေခဲ့တဲ့ မြို့ ကရောင်းချခဲ့တဲ့ ငွေကြေးလေးတွေက နယ်မြို့ လေးတစ်မြို့ မှာ ပိုပိုလျှံလျှံနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါတယ် ။ အိမ်ခြံကောင်းကောင်းလေး တစ်နေရာစာ နောက်ပြီးတော့ အမေ့ ဘက်က မိဘတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ လက်္ဘရည်ဆိုင် လုပ်ငန်ကို အမေက ခွဲယူပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါတယ် ။ အစ်ကိုအကြီးဆုံးက မုန့် ဆရာ၊ ကိုလတ်က ဖျော်ဆရာ၊ အစ်မကြီးက အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်ယူ၊ ကိုလေးနဲ့ သူကတော့ ဆိုင်မှာ ၀ိုင်းကူကြတယ် ။ ညီမလေးကတော့ ဘာမှနားမလည်သေးပါဘူး ညဘက် ဆိုင်သိမ်းချိန်ရောက်ရင်တော့ မိဘတွေ ၊ ညီမလေးနဲ့ သူကတော့ ဆိုင်မှာအိပ်ကြပြီး ။ အစ်ကို အစ်မတွေကတော့ အိမ်မှာ အိပ်ကြတယ် အိမ် နဲ့ဆိုင်ကလဲမလှမ်းမကမ်းလေးပါပဲ ။
တစ်နေ့မီးဆိုတဲ့ ကြောက်စရာသတ္တ၀ါကြီး က သူတို့ ဘ၀ကို ၀ါးမြိုသွားမယ်ဆိုတာ သူတို့ တစ်မိသားစုလုံး လုံးဝ မထင်မှတ်ခဲ့ကြပါဘူး ။ ဆောင်းတွင်းရဲ့ ညသန်ခေါင်ယံတစ်ခုမှ ကြောက်မက်ဖွယ် မီးလုံးကြီးတွေ ၊ သံချောင်းခေါက်သံတွေ ၊ လူသံတွေနဲ့သူလန့် နိုးခဲ့တယ် ။ အမေ့ရဲ့ ငိုသံကိုကြားမှ သူသတိထားမိတာ ကြောက်စရာ မီးလုံးကြီးတွေ ၀ါးမျိုနေတာ သူတို့ ရဲ့အိမ်ကြီးပဲ ။ မီးငြိမ်းဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ အစ်ကိုတွေ ၊ အိမ်နားဝန်းကျင်ကသူတွေ ၊ ဘေးအိမ်တွေက ငိုမြည်းနေတဲ့ မိန်းမကြီးတွေရဲ့အသံတွေ ငရဲခန်းတစ်မျှပါပဲ။ ခေတ်မှီတိုးတတ်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတို့ ရဲ့ ရွှေပြည်ကြီးက မီးသတ်စနစ်ကတော့ သူတို့ အိမ်ကြီး ပြာကျသွားမှပဲ မြောက်မြားလှတဲ့ ပုဒ်မတွေနဲ့ဒဏ်ရိုက်ဖို့ ရောက်လာကြပါပြီး တော်တော်လဲ သံဝေဂ ရစရာကောင်းပါလားနော် ။ ဆုံးရှုံသွားတဲ့ အရာတွေကို တရားနဲ့ မဖြေနိုင် သူ့ အတွက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ သူ့ ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပါဆိုပြီး ဖြေမနိုင်တဲ့ အမေ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီး ( ၆ ) လအကြာမှာ သူတို့ ကို ကျောခိုင်းသွားခဲ့တယ် ။
စိတ်ညစ်စရာတွေ များလွန်းတယ်ဆိုပြီး ကိုလတ်နဲ့ ကိုလေးက ထွက်သွားလိုက်တာ အခုချိန်ထိ သူတို့ အနားကို ပြန်မရောက်လာတော့ပါဘူး ၊ ဘယ်လိုစဉ်းစားစိတ်နဲ့ များဒီလိုတွေးသလဲတော့မသိဘူး အစ်မကတော့ ယောက်ျားနောက်ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားပါပြီး.....။ မုန်းဖို့ ကောင်းလိုက်တာ သူ ၊ သူ့ ရဲ့ အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ကိုအရမ်းမုန်းတယ် ။ အခုတော့ မိသားစု တစ်ခုလုံးရဲ့ တာဝန်တွေက သူ့ ပေါ်ကိုကျရောက်လာပါပြီး သူ ကတော့ ဘ၀ကိုအရှုံးမပေးပဲ ရှေ့ဆက်ရဲ့ဝံစွာနဲ့ဆက်လျှောက်နေပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူ မီးဆိုတာကို အရမ်းကြောက်တယ်။
at 11:18 PM7comments
ဒီသီချင်းလေးကို တစ်နေ့က သတင်းမလာခင်လေး နားထောင်လိုက်ရတယ် ကြည့်ပြီး စိတ်ထဲကြည်နူးသွားသလိုလို သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက် လူသားချင်းစာနာမိသွားသလိုလို ကြီး၂ကျယ်၂ စိတ်တွေဖြစ်သွားမိတယ် ။ သီချင်းလေးကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ မတည်ငြိမ်ဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေအတွက် အရင်လို ပျော်၂ရွှင်၂ပြန်နေကြပါစို့ ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်လေးနဲ့ ထိုင်းနိ်ုင်ငံရဲ့ နာမည်ကျော် မင်းသား မင်းသမီးတွေ အဆိုတော် ၊ဟာသအစီစဉ်မှ လူရွှင်တော်တွေ သတင်းကြေညာသူ အင်တာဗျူးသမား အားလုံးပေါင်းရာကျော်လောက်က သီချင်းလေးကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ။
စဉ်းစားမိတာလေးက ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေ ဘာကြောင့်များမကျေနပ်တာလည်းဆိုတာကို ကျနော့်လိုတိုင်းတစ်ပါးသားတစ်ယောက်က နားမလည်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် စိတ်ထဲဖြစ်သွားမိတာက “သြော် .. သူတို့တွေ အလုပ်ကိုင်တွေလည်း အဆင်ပြေနေပါလျှက် ၊ အစိုးရက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပညာရေးပိုင်းတွေကို အပြည့်အ၀ ဆောင်ရွက်ထားပေးတာတောင် မကျေနပ်ဘူးဆိုတော့ အင်းးးး ရွှေပြည်ကြီးမှာသာဆို ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး လမ်းတံတား ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စာကြည့်တိုက် ပိုက်ဆံရှိမှ အသက်အတွက် အာမခံချက်ပေးနိုင်တာတွေ ။ သူတို့မှာ ကျောင်းမပြီးပဲ လုပ်ငန်းခွင်အာမခံချက်တွေရှိတယ် ကျနော်တို့မှာ ဘွဲ့တစ်ခုရပြီး ဆိုက္ကားနင်းစားနေရတဲ့သူတွေများတယ် အင်း ပြောရင်တော့ အရှည်ကြီးပါ တော်ပါပြီး မကြာခင် ဒီမိုးက တကယ်ရေစီးမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပေါ့နော့်း) သီချင်းလေးနားထောင်ကြည့်ကြပါအုံး ။
တစ်ဝမ်းတည်းကနေ အတူတူ မွေးဖွားလာကြတယ် တစ်သွေးထဲပေါ့ ဒါပေမယ့် စရိုက်ချင်းကတော့ တစ်ယောက် နဲ့ တစ်ယောက် လုံးဝမတူတာ အံ့သြစရာ ကိုကြီးက မိန်းမလှလှလေးတွေကို ကြိုက်တယ် ၊ ကိုငယ်က အကောင်းစာ အရက်တွေကို နှစ်သက်တယ် သူကကော ...ဟင်အင်းး ဘာကိုကြိုက်လဲ ဆိုတာ ဒီနေ့ထိ မသိဘူး ငွေလား အငယ်လေးတုန်းကတော့ ငွေကြောင့်စိတ်နာစရာတွေများလို့ လိုချင်တက်မက်မိခဲ့တာတော့ အမှန်ပဲ အဲ့ဒီငွေကြောင့်ပဲ မိတ်ဆွေတစ်ချို့ ရှားပါးခဲ့သလို ဆွေးမျိုးတစ်ချို့ အသိမှတ်မပြုတာ တစ်ခါခါတော့ ငွေဆိုတဲ့ အသံကြားရင် သူ့နှုတ်ခမ်းက အလိုလို ကွေးညွန့်သွားတယ် ။
သူ့ကြောင့် မျက်နှာပွင့်တာလား မျက်နှာ ငယ်ရတာလား အရှက်ရစေခဲ့တာလားဆိုတာ မသိဘူး ။ သူ့ညီမှန်းသိရင် အစ်မလှလှလေးတွေက မုန့်တွေအများကြီး ၀ယ်ကျွေးတယ် ပွဲသွားတော့မယ်ဆို သနပ်ခါးလူး ပေးတယ် ။ တစ်ခါခါ အိမ်ကိုရောက်လာတတ်ပြီး စားစရာတွေ အများကြီးပါပဲ ။များလွန်းလို့ ဘယ်အစ်မက ကိုကြီး ချစ်သူမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ဘာပဲသိလဲဆိုတော့ စားရရင်တော်ပြီး ။ ဟုတ်ကဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောသလို သူက လူချောတစ်ယောက်ဖြစ်တာတော့အမှန်ပဲ စမတ်စ်ကျကျ နေထိုင်ပြောဆိုတတ်ပြီး အထာနပ်နေတဲ့ မုဆိုးတစ်ယောက်အသွင်နဲ့ သမင်ပေါင်းများစွာကို သူက လိမ်မာ ပါးနပ်စွာ သိမ်းသွင်းနိုင်ခဲ့တယ် ။ အိမ်မှာ အဘက လွဲပြီး သူမှားနေသလား မှန်နေသလား လို့ ဝေဖန်ရဲတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိခဲ့ဖူး ဟိုကောင်လေးဆို သူစွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ သေးထွက်တယ်ဆိုတာကို သူကတစ်ခါခါ ဟာသလုပ်ပြီး ရယ်တယ်။ အင်း...သူဆိုးတာက ဘယ်လိုဆိုးနည်းလဲ ဖဲရိုက်တာလား --နိုး / အရက်သောက်တာကြောင့်လား ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ပြီး အမည်ဖော်မရတဲ့ ဆိုးနည်းတွေနဲ့ မိသားစုကို မျက်နှာပျက်စေတာကတော့ အမှန်ပဲ အခုလား သူ့ဘ၀လေးမှာတော့ သူက ပျော်မြူးနေတတ်ပြီး ဘာကိုမှမတွေးပဲ ရေပေါ်ဆီလို ( ဒါကို..တစ်ယောက်သောသူကတော့ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တယ်တဲ့ )သူ့နာမည်ကြားရင် တစ်ချို့က မဲ့သွားကြတယ် ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ???
သူကတော့ ပေါ်တင်ဆိုးတယ် သွေးဆိုးလွန်းလို့ အမေ၀ယ်စုထားတဲ့ ကြွေပန်းကန် လှလှလေးတွေက တစ်စစီဖြစ်သွားရတဲ့ အကြိမ်းပေါင်းမနည်းဘူး ။ ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ အ အတစ်ယောက်လိုပါပဲ ။
ဒါမယ့် သူ့မှာ သနားတတ်တဲ့ စိတ်တစ်စုံနဲ့အနစ်နာခံတတ်တဲ့ အကျင့်လေးကတော့ ကိန်းအောင်းနေတယ်။ ဘ၀ကို ဘယ်တော့မှ စိတ်ပျက်အားမငယ်နေပဲ ကြမ်းတမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတုန်း ။ သူချစ်တဲ့သူတွေကိုတော့ လိုရင် သွေးပါဖောက်ပေးမယ့် လူစားမျိုး ကံဆိုးစွာနဲ့ လက်တွဲဖော် ဆိုးဆိုးကို ပိုင်ဆိုင်မိလို့ အစွန့်ပယ်ခံရပေမယ့် သူကတော့ အားလုံးကို ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူး ။ တစ်ခါခါတော့ လုံချည်ကပေါင်စထဲထည့်ပြီး ၀ှက်ယူလာတဲ့ အသားဟင်းလေးတစ်ခွက်လောက်ကတော့ ထမင်းဝိုင်းမှာ မိဘအတွက် ရောက်ရောက်လာတတ်တယ် ။
ကျန်တစ်ယောက်သောသူကတော့ ကိုကြီးနဲ့ ရုပ်ချင်းတူတယ်လို့ပြောခံရတိုင်း ဘာမဆိုင် ညာမဆိုင် ဒေါသကထွက်သေး ။ သူများအကြောင်းကိုလည်း သိအောင် ဘယ်တော့မှမကြိုးစားသလို ကိုယ့်သမိုင်းကိုလည်း ကိုယ်ပြန်ဖတ်ရမှာ ပျင်းတယ် ။မထီမဲ့မြင် ပြုတတ်တဲ့ ငုံစိတ်ကလေးက ရှိနေတတ်ပြီး ခဏခဏ လည်းစိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်တတ်တယ် ။ သူ့အကြောင်းတွေကို အားလုံးနီးပါ သိမယ်ထင်ပေမယ့် တကယ့်တမ်း တွေးကြည့်ရင်တော့ အားလုံးကေ၀၀ါးသွားတယ် သေချာတာကတော့ သူက လူကြီးမဆန်သေးတဲ့ လူကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ ။ တစ်ချို့တွေက ဒီပုပ်ထဲက ဒီပဲ ငှက်ပျော်ပင်စိုက် အမျိုးလိုက်မို့ (.....) ညီဆိုတော့ သူ့အစ်ကိုတွေတိုင်းပဲလာမှာပါ ၊ မင်းက (...) ညီလားလို့မေးခံရရင်တော့ ရွဲ့တတ်တဲ့ အကျင့်လေးက မာမာကျောကျော နဲ့ “အဲ့တာ ကျနော်နဲ့ ဘာဆိုင်လဲ ” ၊“ ဘာလုပ်ရမလဲ ” ဒီလို ဘုတော စကား ။ အစ်မတွေဆိုရင် ဒီနေ့ထိ ပေါင်ပေါ်ခေါင်းတင် ဆံပင်ကြမ်းတွေကို ခလေးတစ်ယောက်လို နှုတ်ပေးဖို့ ပူဆာတတ်ပေမယ့် အစ်ကိုတွေအကြောင်းပြောကြတဲ့ စကားဝိုင်းထဲကတော့ ချက်ချင်းထထ သွားတတ်တာ ထူးဆန်းပါ့ ။သူ့အကြောင်းကို သိချာသိဖို့ကြိုးစားပါအုံးမယ် ။
ကွာပြားခြားနားချက်တွေများတဲ့ ညီအစ်ကို (၃)ယောက်မှာ တူညီတဲ့ အချက် (၃) ချက်ကိုတော့သတိထားမိတယ် သူတို့အားလုံး ငွေရဲ့ သားကောင်တွေဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်သွားတာ ၊ အမေက ချစ်ပြီး အမေ့ကိုချစ်တဲ့သားတွေဖြစ်ပြီး အားလုံး က အမေနဲ့ဝေးရာ တစ်ယောက်တစ်နယ်စီမှာ ။ ညီအစ်ကို (၃) ယောက် ခုဆို မဆုံတာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးရှိတော့မယ် ။သူတို့တွေအားလုံး ၀န်မခံပေမယ့် သိနေကြတာက သူတို့(၃)ယောက်စလုံး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အသွေးသားထဲက တကယ်ကိုချစ်ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ ။ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ စကားတွေမဆိုကြပေမယ့် လေလှိုင်းထဲက အသံတွေကြားမှာတော့ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို ပြောတဲ့ စကားက “အိမ်ပြန်တော့ ” တဲ့ ။
ဘောလုံးနဲ့ကျနော်ဘယ်လိုမှ တွဲလို့မရတဲ့ အတွဲပေါ့ ကိုယ့်ခြေသလုံးက လေတိုက်ရင်လဲမယ့်အနေထားဆိုတော့ ဘောလုံးကန်လို့မဖြစ် ခဏကျိုးသွားမှဖြစ် ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေအုံးမယ် ။ အဲ့လို ဘောကန်တာ ၀ါသနာမပါပေမယ့် ရွှေယောက်ဖရဲ့ ကောင်းမှုကြောင့် ကျနော် ၈ တန်းကျောင်းသား အဖြုအမဲ နဲ့ အားကစားဂျာနယ်တွေဖတ်ဖြစ်ပါတယ် စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့ကျနော့်အတွက်တော့အပျော်ဖတ်ပါပဲ နောက်ပိုင်းတော့ အင်အား ၊ တက်လမ်း ဂျာနယ်တွေ ။ ဘောလုံးပွဲသာမကြည့်တယ် ဘယ်ဘောလုံးသမား ဘယ်အသင်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ပြောင်းတယ် ဘယ်ဝန်းကစားတာလား ညာဝန်းကစားတာလား အားလုံးသိ ။ ဖာဂူဆန်ကြီးက စိတ်တိုတိုနဲ့ ဖိနပ်ကို ကန်ထုတ်လိုက်တာ ဘက်ခမ်း မျက်ခုံးကို ထိသွားလို့ အသင်းပြောင်းတဲ့အထိ ဖြစ်သွားတာတွေ ၊ နောက်တန်းမှာ စိတ်ချရတဲ့ အက်ရှလေကိုလ်းတစ်ယောက် ဟိုမော်ဒယ်မလေးကို ဟိုလိုပုံတွေပို့လိုက်တာကောပေါ့ ။
ကျောင်းတက်ကြတုန်းက အဆောင်မှာ ဘောလုံးကန်ကြလို့ လူမပြည့်ရင် ကျနော့်ကို အတင်းဆွဲခေါ်ကြပါတယ် လူမပြည့်လို့ဆွဲခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ အရည်ချင်းကတော့ မက်ဆီနဲ့ နင်လားငါလားပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က ဂိုးပဲစောင့်တယ် ပြီးရင် “ငါ ဘောင်ဘီးမ၀တ်ဘူးနော် လုံချည်နဲ့ပဲ ဖမ်းမယ် တော်ကြာ ဟိုအဆောင်ကကောင်မလေးတွေ ငါ့ကြည့်ပြီးရယ်ကြမှာ ” တကယ်တော့ ကျနော်က အကြံနဲ့ပါ ဂိုးဝင်တော့မယ် ဂိုသမားက ဖမ်းမနိုင်တော့ဘူးဆို ကျနော်က လုံချည်ကြီးဖြန့်ပြီး ဟိုပြေး ဒီပြေးလိုက်လုပ်ကေား) အဲ့တော့ ဂိုးမ၀င်တော့ဘူးပေါ့ ၀င်ရင်လည်း လုံချည်ထဲတိုးသွားကော ဟိဟိ အဲ့လိုတော်တာ ။
ပြီးတော့ ကျနော်က အစွဲနဲ့ ဘောလုံးကို အားပေးတာ ပွဲဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အသင်းဆို လုံးဝကိုထမကြည့်တာ ကိုယ်အားပေးတဲ့အသင်း ဥပမာ မန်ယူဆိုရင် ရှုံးတော့မယ်သိတာနဲ့ တီဗွီပိတ်ပြီး အိပ်လိုက်ကော ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကဘောလုံးအသင်းထက် ဘောလုံးသမားတွေထက် မောရင်ဟိုကို ပိုကြိုက်တယ် ။ တစ်ယောက်ကတော့ ရုပ်ဖြောင့်တဲ့ စီရော်နယ်ဒိုရဲ့ ပရိတ်သတ် ကျနော်ကတော့ ဖာဂူဆန်ကြီးပေါ့း) ။ ညည ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ငြင်းရင် အော်ကြတဲ့ အခါတွေ မှတ်မိသေး ။ အိမ်က တူက ရပ်ကွက်ပွဲမှာ ရှေ့တန်းက ၀င်ကစားတယ် ဂိုးဝင်တဲ့အခါကျတော်ပါသေးရဲ့ ဂိုးများမ၀င်လို့ကတော့ ဆဲလိုက်တာများ အော်.....ငါ့အစ်မနှယ့်နော် နေရင်းထိုင်ရင် သူ့မှာ ယောက်ျားတွေများသွားလိုက်တာလို့ သံဝေဂ ရမိတယ် သူကတော့ ဘောလုံးသမားအမေဆိုတော့ ပွဲတိုင်းလိုက်လိုက်ကြည့်နေတာကျင့်သား ရသွားပြီထင်ပါ့ ။
လေကြောရှည်နေတာနဲ့ ဒီပို့စ်ရဲ့ ဆိုလိုရင်းပါ ပျောက်သွားတယ် ကိုအောင်ပျု တဂ်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဘယ်အသင်းဗိုလ်စွဲမလဲဆိုတော့ ပြောနေစရာလိုလို့လားဗျာ အင်္ဂလန်ပဲ ဗိုလ်စွဲမှာပေါ့ ။ နောက်တန်းမှာ ဖာဒီနန် ၊ တယ်ရီ ၊ ကိုလ်း သူတို့ရှိတယ် ဘယ်ရှေ့တန်းသမားကျော်မလဲ ။ အလယ်တန်းမှာ လမ်းပတ် ၊ဂျိုလ်ကိုလ်း ပြီးတော့ ရှေ့တန်း ရွန်းနီ ။ ကျနော်ကြိုက်တဲ့ မန်ယူကစားသမားတွေ အများစုပါတာကြောင့်လည်း အင်္ဂလန်ကို ချစ်တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ ဗေဒင်နည်းအရ ပြောရရင် အင်္ဂလန်ဆိုတော့ တနင်္ဂနွေနံ ၊ ကန်မယ့်နေရာက တောင်အာဖရိက တောင်ကို ဂဌုန်က အတောင်ပံခပ်ပြီး ကျော်မယ့် နမိတ်ကိုပြနေတယ် ။ အုပ်စုအဆင့်တွေမှာ 13/19/23 နေ့တွေမှာကန်မှာဆိုတော့ ပေါင်းခြင်းက 55 ။ 55 ဆိုတော့ မမ ကြာသပတေးနံဖြစ်တဲ့အတွက် ဓာတ်တူနာမ်တူ ဆေးဘက်ယူ တနင်္ဂနွေနံ နဲ့ ကြာသပတေးနံဟာ မိတ်ဖက်တွေဖြစ်တာကြောင့် အင်္ဂလန်က အုပ်စုပထမ နဲ့တက်မယ် ။
ကန်တဲ့ရာသီက ဂျွန်လ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျွန်ကို လန် (အင်္ဂ်လန်) က တက်ခွထားတဲ့ ရာသီ ဆိုတော့ကားး ဗိုလ်လုပွဲမှာ အင်္ဂလန်က ဘရာဇီးကို 10-1 ဂိုးနဲ့ နိုင်သွားပါကြောင်း ။ ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း ပိတ်ပွဲအခမ်းနားကိုတော့ မေခလာက ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ ကိုကိုသီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေပေးရန်အတွက် မြန်မာအစိုးရကို ဘောလုံးပွဲကျင်းပရေးကော်မတီမှ အဿပြာ ၂ ဒေါ်လာထိုးပြီး လာဘ်ထိုးထားကြောင်းခင်ဗျား။
ဆက်ပြီးရေးပေးစေချင်တဲ့သူကတော့ ခံစားမှုသံစဉ်မှ blackroze ကို ရေးပေးစေချင်ပါတယ် ခင်မင်မှုပေါ့ အဆင်ပြေရင် ရေးပေးပါ ။ ကျေးဇူး ။